Manchester City oo guul soo laabasho ah ka gaartay kooxda Cheltenham Town…+SAWIRRO – Gool FM
(England) 23 Jan 2021. Manchester City ayaa kaga soo adkaatay kooxda heerka afaraad ee Cheltenham Town oo ay ku booqatay garoonkeeda Jonny-Rocks 1-3, ciyaar ka tirsaneyd kulammada wareegga afaraad ee tartanka FA Cup-ka.
Qeybta hore ee ciyaarta ayeey labada kooxood Cheltenham Town iyo Manchester City ku kala mareen barbardhac 0-0 ah.
Daqiiqadii 59-aad kooxda kubadda cagta Cheltenham Town ayaa hoggaanka u qabatay dheesha waxaana 1-0 ka dhigay xiddigooda Alfie May, waxaana ka caawiyay saaxiibkiis George Lloyd.
81 daqiiqo marka ay ciyaartu aheyd kooxda Manchester City ayaa dhalisay goolka barbardhaca waxaana 1-1 ka dhigay dheesha Phil Foden, kaddib markii uu caawinta goolkan uu ka helay Joao Cancelo.
Daqiiqadii 84-aad Manchester City ayaa la wareegtay hoggaanka ciyaarta kaddib markii uu 1-2 ka dhigay xiddiga reer Brazil ee Gabriel Jesus, waxaana ka caawiyay goolkan Fernandinho.
90 daqiiqo marka ay dheesha mareysay Manchester City ayaa sii dheereysatay hoggaaminta dheesha kaddib markii uu 1-3 ka dhigay Ferran Torres oo caawin ka helay saaxiibkiis Ilkay Gundogan.
Ugu dambeyntii ciyaarta ayaa ku dhamaatay 1-3 oo ay Manchester City kaga soo adkaatay Cheltenham Town oo ay ku booqatay garoonkeeda Jonny-Rocks, sky blue ayaana sidaas ugu gudubtay wareega xiga ee tartanka FA Cup-ka.